Olee Otú Ị Pụrụ Isi Guzogide Ọchịchọ Na-ezighị Ezi?
Teta! | Disemba 8, 2003
“Mgbe m chọrọ ime ihe ziri ezi, ihe ọjọọ na-anọ n’ebe m nọ.”—NDỊ ROM 7:21.
I KEKWE, Pọl onyeozi rụsiri nnọọ ọrụ ike iji kwalite ụkpụrụ ndị dị elu nke Iso Ụzọ Kraịst karịa onyeozi ọ bụla ọzọ. (1 Ndị Kọrint 15:9, 10) N’agbanyeghị nke ahụ, o zoghị ọnụ n’ikweta ihe ahụ dị n’elu. Ọ nọgidere na-alụso ọchịchọ na-ezighị ezi ndị na-abata ya n’obi ọgụ. Ọ̀ dịtụwo mgbe i nwere mmetụta dị otú ahụ Pọl onyeozi nwere? N’ezie, dị ka ndị na-ezughị okè, ònye n’ime anyị bụ onye na-alụsotụbeghị ọchịchọ na-ezighị ezi ndị na-abata ya n’obi ọgụ?
Nye ọtụtụ ndị, ọgụ ha na-alụ iji guzogide ọchịchọ na-ezighị ezi na-esi nnọọ ike. Ndị ụfọdụ na-alụso ọchịchọ siri ike nke inwe mmekọahụ́ rụrụ arụ ọgụ. Ndị ọzọ bụ ndị ịgba chaa chaa, ise ụtaba, ịṅụ ọgwụ ọjọọ, ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ na-aba n’anya riworo ahụ́. Mgbe anyị na-enwe ọchịchọ na-emerụ ahụ́ nakwa nke na-ezighị ezi, olee otú anyị pụrụ isi guzogide ha? Enyemaka dị aṅaa ka e nwere? Ọ̀ dị mgbe ọgụ a na-alụ megide ọchịchọ na-ezighị ezi ga-akwụsị?
Ịhụnanya—Isi Ihe Na-eme Ka E Guzogide Ọchịchọ Na-ezighị Ezi
Jizọs mere ka iwu abụọ kasịnụ n’Iwu Mozis pụta ìhè. Nke mbụ bụ nke a: “Ị ghaghị iji obi gị dum, jirikwa mkpụrụ obi gị dum, jirikwa uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya.” (Matiu 22:37) Ọ bụrụ na anyị ahụ Chineke n’anya dị ka Jizọs kwuru na anyị aghaghị ịhụ ya, ó kwesịghị ka ime ihe na-atọ Ya ụtọ bụrụ ọchịchọ anyị kasịnụ? Ọ bụrụ otú ahụ, ezi ọchịchọ dị otú ahụ pụrụ inyere anyị aka ịlụso ọbụna ọchịchọ na-ezighị ezi ndị kasị sie ike ọgụ! Nke a abụghị ka e kwuwe ka ọ tọwa. Ọtụtụ nde Ndị Kraịst na-enwe ihe ịga nke ọma n’iguzogide ọchịchọ na-ezighị ezi kwa ụbọchị. Olee otú ị pụrụ isi mee ka gị na Chineke nwee nkekọ siri ike otú ahụ? Ọ bụ site n’iji ekele na-atụgharị uche n’ịdị mma ya dị ka a na-ahụ ya n’ihe ndị o kere eke, n’ime Bible, nakwa n’otú o si emeso anyị ihe n’otu n’otu.—Abụ Ọma 116:12, 14; 119:7, 9; Ndị Rom 1:20.
Iwu nke abụọ kasịnụ Jizọs zoro aka na ya bụ: “Ị ghaghị ịhụ onye agbata obi gị n’anya dị ka onwe gị.” (Matiu 22:39) Pọl onyeozi kwuru na ịhụnanya “adịghị akpa àgwà na-ekwesịghị ekwesị” nakwa na “ọ dịghị achọ ọdịmma nke ya.” Ya mere, ịhụnanya dị otú ahụ nke na-adịghị achọ ọdịmma onwe ya nanị na-enyere anyị aka izere ịkpa àgwà ọ bụla ga-emerụ ndị ọzọ ahụ́. (1 Ndị Kọrint 13:4-8) Olee otú a pụrụ isi zụlite ya? Ọ bụ site n’itinye onwe anyị n’ọnọdụ ndị ọzọ na iji ezi obi na-echebara mmetụta na ọdịmma ha na-adịgide adịgide echiche.—Ndị Filipaị 2:4.
Enyemaka Dị Aṅaa Ka E Nwere?
Ebe ọ bụ na Chineke na-aghọta otú o si esiri anyị ike ime ihe ziri ezi, o mewo ka e nwee ihe enyemaka n’ụzọ dị iche iche. Site n’Okwu ya e dere ede, bụ́ Bible, ọ na-ezi anyị ịkpọ ihe ọjọọ asị na inwe nkwanye ùgwù kwesịrị ekwesị n’ebe ọ nọ. (Abụ Ọma 86:11; 97:10) Bible nwere ihe ndekọ ndị mere eme bụ́ ndị na-egosi ihe ọjọọ na-esite n’inwe ọchịchọ na-ezighị ezi. Ọzọkwa, Jizọs kwuru na Chineke ga-enye anyị mmụọ nsọ Ya, bụ́ ikike kasịnụ n’eluigwe na ala, ma ọ bụrụ na anyị arịọ maka ya. (Luk 11:13) Ọ pụrụ ime ka mkpebi anyị mere ime ihe ziri ezi sikwuo ike. Ihe enyemaka ọzọ bụ nkwado na agbamume Ndị Kraịst ndị ọzọ, bụ́ ndị na-eguzogidekwa ọchịchọ na-ezighị ezi pụrụ inye anyị. (Ndị Hibru 10:24, 25) Ka mmetụta ndị a dị mma na-anọchi ndị na-adịghị mma, anyị na-enweta enyemaka ná mgbalị anyị na-eme ime ihe ziri ezi. (Ndị Filipaị 4:8) Ụzọ ndị a e si enweta enyemaka hà dị irè n’ezie?
Tụlee ihe banyere Fidel, bụ́ onye a maara nke ọma n’ógbè ya dị ka onye aṅụrụma. Mgbe ọ bụla mmanya na-egbu ya, ọ na-ese ụtaba, na-agba chaa chaa, na-alụsokwa ndị ọzọ ọgụ. Ọmụmụ Bible nakwa mmekọrịta ya na Ndịàmà Jehova na-enwe nyeere ya aka ịkwụsị omume ndị ahụ. Ugbu a, ya na nwunye ya na ụmụ ya abụọ na-anụ ụtọ ndụ ka nnọọ mma.
Mmadụ pụrụ ịjụ, sị, ‘Gịnịkwanụ ma m kpaghachi àgwà ahụ?’ Jọn onyeozi kwuru banyere nke ahụ. O dere, sị: “Ụmụntakịrị m, m na-edetara unu ihe ndị a ka unu wee ghara ime mmehie. Ma, ọ bụrụ na onye ọ bụla emee mmehie, anyị nwere onye inyeaka nọ n’ebe Nna ahụ nọ, bụ́ Jizọs Kraịst, onye ezi omume. Ọ bụkwa àjà ime udo maka mmehie anyị, ma ọ bụghị nanị maka nke anyị kamakwa maka nke ụwa dum.” (1 Jọn 2:1, 2) Ee, àjà mgbapụta Jizọs na-ekpuchi njehie nke onye chegharịrị echegharị ma jiri ezi obi na-agbalịsi ike ime mgbanwe iji na-eme ihe na-atọ Chineke ụtọ. N’ihi ndokwa dị otú ahụ e mere, olee ezi ihe mmadụ pụrụ ikwu na ọ bụ ya mere ọ ga-eji kwụsị mgbalị ọ na-eme iji mee ihe ziri ezi?
A Ga-emeri Ọchịchọ Ndị Na-ezighị Ezi
Ọ bụrụ na anyị enwee ịhụnanya n’ebe Chineke na onye agbata obi anyị nọ ma jiri enyemaka Chineke na-enye anyị na-eme ihe, ọbụna ugbu a, anyị pụrụ inwe ihe ịga nke ọma n’ọgụ anyị na-alụso ọchịchọ na-ezighị ezi. Ọzọkwa, Okwu Chineke na-emesi anyị obi ike na ọgụ a agaghị adịgide ruo mgbe ebighị ebi. N’ọdịnihu dị nso, ndị ji ndokwa ime mmụọ Chineke nyere mee ihe, ga-abụ ndị e mere ka ha nwere onwe ha kpam kpam, ma n’ụzọ anụ ahụ́ ma n’ụzọ ime mmụọ. (Mkpughe 21:3-5; 22:1, 2) Ha ga-enwere onwe ha pụọ n’ibu arọ nke mmehie nakwa ọnwụ ọ na-akpata. (Ndị Rom 6:23) N’aka nke ọzọ, ndị nọgidere na-enwe ọchịchọ nke ime ihe ndị na-adịghị ọcha nakwa nke na-emerụ ahụ́ agaghị eso enweta ngọzi ndị ahụ.—Mkpughe 22:15.
Lee ihe nkasi obi ọ bụ ịmara na ọgụ anyị na-alụ megide ọchịchọ ndị na-ezighị ezi abụghị nke na-agaghị akwụsị akwụsị. A ga-ewepụ ha kpam kpam ruo mgbe ebighị ebi. Lee ahụ́ efe nke ahụ ga-eweta!
Iwe A Na-ewe Megide Ụtụ Isi—Ọ̀ Na-arịwanye Elu?
Ụtụ Isi Ọ̀ Bụ Ụgwọ A Na-akwụ Iji Nwee “Obodo Mepere Anya”?
Ì Kwesịrị Ịtụ Ụtụ Isi?
Anakweere M Echiche Chineke Banyere Ọbara
Olee Otú M Pụrụ Isi Mee Ka A Ghara Iji Aha Nwanne M Na-amata M?
Ncha—“Ọgwụ Mgbochi Ọrịa I Ji Aka Gị Enye Onwe Gị”
Ihe Oriri Sitere n’Ubi nke Gị
Mgbe Ahụ́ Ọkụ Jidere Nwa Gị
Oké Ibu Ọ̀ Ghọwala Nsogbu Zuru Ụwa Ọnụ?
Ndepụta Ntụaka Isiokwu Dị Iche Iche Maka Mpịakọta nke 84 nke Teta!
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu MAGAZIN Disemba 8, 2003
Disemba 8, 2003
MAGAZIN Disemba 8, 2003